Nkwurịta okwu Semalt Banyere Ndị Ntanetị Weebụ na Ntanetị Ntanetị
ọdịnaya weebụ na data nwere ike ịnweta n'ọtụtụ ụzọ, na usoro kachasị na-eji API ma ọ bụ gbasaa ibe weebụ site na inye koodu ziri ezi. Ndị na-amalite ọrụ ha ma ọ bụ na-achọ ịmalite otu. N'ihi omume a, ị nwere ike wepụ ọtụtụ saịtị dịka o kwere mee ma hazie data dịka ihe ị chọrọ - technical consulting office. N'ebe a, anyị atụlewo ihe kacha mma scrapers web na mmemme ntinye data.
1. Na-arụ ọrụ:
N'ụzọ dị mwute, mgbasa ozi ọha na eze yana ntanetị weebụ na-anọkarị n'ụdị ndị a na-emebeghị. Na Ngwadogwu, ị nwere ike nyochaa ọtụtụ ebe na saịtị na netwọk ịkparịta ụka n'Ịntanet. Ọ pụkwara inyere gị aka ịchekwa ihe oyiyi na ngwaọrụ gị n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ngwakọta ọrụ na-enye weebụ ngwa ngwa, nke ziri ezi ma nwee ntụkwasị obi ma ọ bụ ọrụ nchịkọta data. Ọ nwere ike inyere gị aka iwepu data site na Wikipedia, TripAdvisor, ibea edo edo, ibe ọcha, Google Maps, Yelp, na Twitter.
2. Grepsr maka Chrome:
N'adịghị ka ọtụtụ ihe nchọgharị weebụ na-ewe ihe ubi ma ọ bụ ozi bara uru, Grepsr nwere ike Wepụ data gị n'enweghị mkpa nke Koodu Ị ga - ejikọta ya na ngwaọrụ nchekwa nchekwa igwe ma malite ịchọta data ịchọrọ. Grepsr na - echekwa data na Google Drive, ma Dropbox, Amazon, na FTP ọrụ dị. iji chọpụta data ọhụrụ na data dị na oge gị kara aka ka ị ghara inwe oge iji chọta ozi bara uru na ịntanetị.
Tarantoola bụ Ngwá ọrụ weebụ dị ike nke mara maka njirimara omume enyi-ya. Ọ nọwo na gburugburu ruo ọtụtụ afọ ma kpochapụ ọtụtụ saịtị na blọọgụ. Ọ pụkwara inyere aka ịwuda ebe ị na-eme ma wepụ nhazi na data ndị a na-enweghị usoro isi iyi ntaneti
iDataGuru na-enye ihe ndeputa na-ezighi ezi, n'enweghi ihe ize ndụ na nke bara uru. osote, ọrụ ntanetị weebụ, ịchọta ihuenyo, na ọrụ ederede. N'ịbụ onye na-eduzi software, iDataGuru na-enyocha data gị ozugbo ma nwee mmasị na ndị ọkachamara ahụike, ọkachamara IT, ndị na-akụ ego, ndị isi ego, na ndị na-emepe weebụ.
BotScraper bụ ihe dị ike ma dị ịtụnanya weebụ na ihe ntinye data nke na-agbapụta n'ime ịntanetị ma chọpụta ihe niile data maka gị. Ọ na-agbanwe ozi ahụ na-abaghị uru iji nweta data bara uru, na-enyefe ọnụ ahịa gị n'ịntanetị. Ọ bụ 100% usoro na-enweghị ihe ize ndụ nke jikọtara na ndị ọzọ web scraping ọrụ iji nye gị ọrụ ahaziri, na-abịa na gị na-atụ anya na-emezu mkpa azụmahịa gị. BotScraper bụ usoro ihe nchịkọta data nke dị oké njọ nke gbanweworo ịntanetị na ibu nke data dị mma. Software a nwere ike wepụ ozi ịntanetị gị ma kpochapụ ebe nzuzo na ozi ịntanetị na-enweghị ihe ọ bụla.